★မြန်မာ့အလင်း★: ဗုဒ္ဓ၏ ထူးခြားချက်များ
ဗုဒ္ဓသည် မိုးရာသီတွင် နားနေ၍ အခြားအခါကာလများတွင် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ခရီးလှည့်လည်ပြီးလျှင် တရားဟောတော်မူလေ့ရှိ၏။ တစ်ခါတစ်ခါရံတွင်မူ သာသတ္တိ၊ ဝေသာလီစသောမြို့ ကြီးများတွင် သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ မဇ္ဇိမနိကယ် အရိယပရိသေသနသုတ်၏ နိဒါန်းတွင် ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္တိမြို့ တွင် သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် တစ်နေ့ တာ မည်သို့ ကုန်လွန်စေပုံကို ဖော်ပြထား၏။
တနေ့ သော နံနက်စောစောတွင် ဗုဒ္ဓသည် သင်းပိုင်ကိုပြင်ဝတ်၍ သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူပြီးလျှင် မြို့ တွင်းသို့ဆွမ်းအလို့ ငှာ ကြွသွား၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို့ သည် အရှင်အာနန္ဒာအား ဘုရားရှင်၏ တရားစကားကို မိမိတို့မကြားနာရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ ကြားနာလို ကြောင်း လျှောက်ကြ၏။ အရှင်အာနန္ဒာက ရဟန်းတို့ အား ဒမ္မကပုဏ္ဏား၏ ကျောင်းသင်္ခမ်းသို့ သွား၍ နေကြရန်ပြော၏။ ရဟန်းတို့ သည် ထိုကျောင်းသို့ သွားကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ဆွမ်းစားပြီးလျှင် အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်၍ ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းသို့ ကြွသွားတော်မူ၏။ ထိုကျောင်းတွင် တစ်နေကုန် နေတော်မူပြီးသော အရှင်အာနန္ဒာနှင့်အတူ ရေချိုးဆိပ်သို့ကြွသွား၍ရေသပ္ပာယ်တော်မူ၏။ ရေသပ္ပာယ်ပြီးသောအခါ အရှင်အာနန္ဒာက ဘုရားရှင်အား ဒမ္မကပုဏ္ဏား၏ကျောင်းသို့ကြွတော်မူရန် ပန်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုကျောင်းသို့ကြွသွား၏။
ရဟန်းတို့ သည် တရားစကားဖြင့် စည်းဝေးနေကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် တံခါးမုခ် အပြင်ဘက်တွင်ရပ်လျှက် စကားအဆုံးကိုဆိုင်းငံ့နေတော်မူ၏။ စကားဆုံးလတ်သော် ချောင်းဟန့် ၍ တခါးရွက်ကို ခေါက်၏။ ရဟန်းတို့ က တံခါးကိုဖွင့်၍ ဗုဒ္ဓသည် ခင်းထားအပ်သောနေရာတွင် ထိုင်ပြီးလျှင် "ရဟန်းတို့ ၊ ယခု ငါဘုရား ကြွလာသောအခါ အဘယ်စကားဖြင့် သင်တို့ စည်းဝေး၍ ဟောပြောနေကြကုန်သနည်း" ဟု မေး၏။ ရဟန်းတို့ က မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြပါသည်ဟု လျှောက်ထားကြသော် ဗုဒ္ဓသည် မိမိ ဘုရားမဖြစ်မီက ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပုံများကို ပြောပြလို၍ အရိယပရိယေသနသုတ်ကို ဟောတော်မူ၏။
ထိုတရားပွဲများတွင် တခါတရံ ရဟန်းတပါးသည် နေရာမှထ၍ လက်အုပ်ချီကာ ဗုဒ္ဓား အခွင့်ပန်ကြားပြီးနောက် မိမိသိလိုသော အချက်ကို မေးလျှောက်လေ့ရှိ၏။ တရားပွဲများသည် အတော်ညဉ့်နက်မှ ပြီးဆုံး၏။ ဘုရားရှင် ပင်ပန်းညောင်းညာသောအခါ အရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာစသော တပည့်မထေရ်ကြီးများက ဆက်လက်၍ ဟောပြောကြ၏။
ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းသံဃာတို့ ၏ စည်းဝေးပွဲများသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်သော စည်းဝေးပွဲများဖြစ်၏။ သာမညဖလသုတ်တွင် အဇာတသတ်မင်းသည် ဘုရားရှင်အားဖူးမြှော်ရန် ဆရာဇီဝကနှင့်အတူ ကျောင်းတော်သို့ သွား၏။ အချိန်ကား ညချမ်းအချိန်ဖြစ်၏။ ဘုရင်သည် ကျောင်းအနီးသို့ ရောက်သောအခါ ကြက်သီးမွေးညင်းထ၍ ထိတ်လန့် သွား၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းသံဃာ ၁၅၀၀ နှင့်အတူ ကျောင်းတိုက်ထဲတွင် သီတင်းသုံးနေတော်မူသော်လည်း ချောင်းဆိုသံ၊ ချေသံ တစ်ချက်မျှမကြားရပဲ အလွန်တိတ်ဆိတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ဇီဝကက အားပေးနှစ်သိမ့်မှ အဇာတသတ်မင်းသည် ကြောက်စိတ်ပြေ၍ ကျောင်းထဲသို့ ဝင်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓကို ဖူးမြော်လေသည်။
ဗုဒ္ဓသည် တိတ်ဆိတ်မှုကို နှစ်သက်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆွမ်းစားပြီးလျှင် တော်ထဲသို့ ကြွသွား၍ သစ်ပင်များအောက်တွင် နေတော်မူလေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ အား စကားပြောလျှင် တရားစကားကို သာပြောကြရန်၊ သို့ မဟုတ် ဆိတ်ဆိတ်နေရန် မကြခဏ သတိပေး၏။ တခါသော် ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြှောက်ရန် ရောက်လာကြသော ရဟန်းတို့ သည် အချင်းအချင်း အော်ဟစ်ပြောဆို၍ ဆူညံလှသဖြင့် ကျောင်းမှ နှင်ထုတ်ခံကြရ၏။ (မဇ္ဇိမ နိကာယ် ၊ စာတုမသုတ်)။ တိတ်ဆိတ်မှုကို ဗုဒ္ဓ နှစ်သက်ကြောင်း လူအများသိကြ၏။ ပရိဗိုဇ်တို့ သည် ဆူညံစွာ စကားပြောနေကြစဉ် အဝေးမှလာသော ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတစ်ဦးကိုမြင်သော် အချင်းတို့ အသံမပြုကြကုန်လင့်၊ ဗုဒ္ဓ၏ တပည့်သည် လာနေ၏။ သူတို့ သည် တိတ်ဆိတ်မှုကို နှစ်သက်၏ဟု အချင်းအချင်း သတိပေး၍ ဆိတ်ဆိတ်နေကြ၏။ (အင်္ဂုတ္တရ-ကိံဒိဠိကသုတ်)
ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်သွင်ပြင် လက္ခဏာကို ယခုခေတ် လူတို့ စိတ်ကူးဖြင့် ခန့် မှန်းကြည့်ရန် ခဲယဉ်း၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှေးအကျဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ဆင်းတုများသည် ဂရိ(ခေါမ) လက်ရားများကို အခြေပြုထား၍ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသည့်နောက် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာသည့် တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓရုပ်တုများ ထုလုပ်ကိုးကွယ်သော အလေ့အထ မရှိခဲ့ချေ။ အင်္ဂလိပ်ပညာရှင် ဆာချားစအဲလီး၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြရမည်ဆိုသော် "သူတော်သူမြတ်အသွင် ပြထားသော ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်လက္ခဏာသွင်ပြင်ကို အမှန်အတိုင်း စိတ်ထဲတွင် မြင်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် မထင်ပါ။ အိန္ဒိယပြည် ဘားနတ်အရပ်တွင် တွေ့ ရသော လုလင်ပျိုအသွင် ထုလုပ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ထုများသည်သာလျှင် ဗုဒ္ဓ၏ နဂိုဥပဓိရုပ်ကို အတော်အတန်မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ထိုရုပ်ထုများသည် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားသည်ဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ သန်မာတောင်တင်းသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင် အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ရှိသော နိပေါမင်းသားပျို၏ ရုပ်လက္ခဏာ ပေါ်ထင်လျက် ရှိပါသည်။ ဂေါတမသည် ဗုဒ္ဓ သို့ မဟုတ် စကြ၀တေးမင်းဖြစ်ရန် ဇာတာပါသည်ဆိုသော စကားမှ ယုတ္တရှိ၏။ အကယ်၍ သူသည် ရဟန်းမပြုခဲ့ပါက နာမည်ကျော် စစ်သူကြီးဖြစ်မည် အမှန်ဖြစ်၏။"
ဗုဒ္ဓသည် ကျန်းမာတောင်တင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ပိဋ္ဋိကတ်စာပေတွင် ထင်ရှား၏။ ဘုရားမဖြစ်မီက ခြောက်နှစ်တိုင်တိုင် ပြင်းထန်သောအကျင့်ကို ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ကျင့်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊ အသက် ၈၀ အထိ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ခြေလျင်ခရီးလှည့်လည်၍ တရားဟောပြောခြင်း၊ အိုမင်းသောအရွယ်တွင်ရောဂါဝေဒနာအပြင်းအထန် ခံစားရပြီးသည့်နောက်ပင် မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသော ကုသိနာရုံသို့ခြေလျင်ကြွသွားခြင်း စသည်တို့ ကို ထောက်ချင့်၍ ဗုဒ္ဓသည် ကိုယ်ခန္ဓာ အထူးကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းကြောင်း ယုံမှားဖွယ်ရာ မရှိချေ။
ထိုမျှ ထူးထူးခြားခြား ကိုယ်လက်ကျန်းမာတောင့်တင်းမှုသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် အစားသောက်တွင် မယုတ်မလွန် ခြိုးခြံ၏။ " ရဟန်းတို့ ၊ ငါသည် ညစာမစားသောကြောင့် ကျန်းမာ၍ အနာရောဂါကင်း၏၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်၍ ချမ်းသာစွာနေရ၏၊" (မဇ္ဇိမနိကာယ်၊ ကိဋ္ဋာဂီရိသုတ်)။ လောကတွင် ကျန်းမာ၍ အသက်ရှည်သောသူတို့ သည် အများအားဖြင့် ဘ၀ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုရှိ၍ မနားမနေ အလုပ်လုပ်သောသူများ ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် လူသတ္တ၀ါတို့ ကို သံသရာဝဋ္ဋ်ဆင်းရဲ မှ ကယ်ချွတ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးသောအခါတွင်ပင် သုဘဒ်ရဟန်းအား ဟောပြောဆုံးမတော်မူခဲ့သေးသည် မဟုတ်ပါလော။
ဗုဒ္ဓအား အထူးကျန်မာ အသက်ရှည်စေသော အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ကိလေသာမီးအားလုံး ငြိမ်းသတ်ပြီး၍ ထာဝရ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်၏။ တခါသော် ဗုဒ္ဓသည် အာဠ၀ီပြည် နွားတို့ သွားရာဖြစ်သော လမ်းနံဘေးရှိ ရင်းတိုက်တောအတွင်း သစ်ရွက်အခင်းနှင့် သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ဟတ္တားအာဠ၀က မင်းသားသည် လှည့်လည်သွားလာရင်း ဗုဒ္ဓကိုမြင်လေသော် အနီးသို့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် "မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်ဘုရားသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်တော် မူရပါ၏လော" ဟု မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက "မင်းသား၊ ငါသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်ရပေသည်" ဟုပြန်ပြော၏။
ထိုအခါ မင်းသားသည် များစွာအံ့အြ၍ "အရှင်ဘုရား၊ ယုခုအချိန်သည် ဆောင်းဥတုဖြစ်၍ အလွန်အေးချမ်းလှပါ၏။ မြေသည် နွားခွာရာတို့ ဖြင့် ကြမ်းတမ်းလှပါ၏။ သစ်ရွက်အခင်းသည် ပါးလွန်းလှပါ၏။ သစ်ပင်မှ သစ်ရွက်တို့ သည် ကျဲရရဲ ရှိကြပါကုန်၏။ အရပ်လေးမျက်နှာမှ အေးမြသောလေတိုက်ခတ်နေ၍ ဆီးနှင်းတို့ သည် တဖွဲဖွဲကျလျက်ရှိပါ၏။ သို့ ဖြစ်ပါလျက် ငါသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်ရသည်ဟု အရှင်ဘုရားမိန့် တော်မူဘိ၏" ဟုလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက လောကတွင် ကာမဂုဏ်ခံစား၍ နူးညံ့သောနေရာ အိပ်ရာတွင် အိပ်ရသော်လည်း ကိလေသာမီး တောက်လောင်နေသောသူသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်ရမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိမှာ ကိလေသာရာဂမီး ပယ်သတ်ပြီးပြီးဖြစ်၍ မည်သည့်နေရာမျိုးတွင်မဆို ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်ရကြောင်း မိန့် တော်မူလေသည်။ (အဂုင်္တ္တရနိကာယ်၊ တိကဒဟတ္တာဠ၀ကသုတ်)
ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုသည် ရုပ်လက္ခဏာအဆင်းသဏ္ဍာန်တွင် အမြဲထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေမည်ဖြစ်၏။ သို့ ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓကို ပထမအကြိမ်တွေ့ မြင်ရသော ဥပက တက္ကတွန်းက "ငါရှင်၊ သင်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း၊ သင်၏ နြေ္ဒတို့ သည် ကြည်လင်လှ၏ ၊ အရေအဆင်းသည် စင်ကြယ်၍ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှိ၏ " ဟု ဆို၏။ ဗုဒ္ဓကို ဆေးဖော်ကြောဖက် မလုပ်ဘဲနေရန်ဆုံးဖြတ်ထားသော ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးသည် ဗုဒ္ဓကိုမြင်ရုံနှင့်ပင် မိမိတို့ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မေ့လျော့၍ ခရီးဦးကြို ပြုကြ၏။
ဗုဒ္ဓ၏ တင့်တယ်ခန့် ညားသော ဥပဓိရုပ်ကြောင့် တစ်ကြိမ်မြင်ကာမျှနှင့် ကြည်ညိုသောသူများ ရှိသည်နည်းတူ ဗုဒ္ဓ၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်သတင်းကို ကြားကာမျှနှင့် ကြည်ညိုသောသူများမှာလည်း မနည်းလှချေ။ ပေါက္ခရသာတီ၊ သောဏဒန္တ စေသောအလွန်ဇာတ်ကြီး၊ မာနာကြီးသည့် ဗြဟ္မာဏခေါင်းဆောင်တို့ သည်ပင် ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကြားရုံမျှနှင့် သွားရောက် ဖူးတွေ့ လိုသော ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာကြ၏။ ပါဠိပိဋ္ဋကတ်၌ ဗုဒ္ဓအား အထူးလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာ ဗြဟ္မာယုအမည်ရှိ ဇာတ်ကြီး ဗြဟ္မာဏတစ်ဦးနှင့် ပသေနဒီကောသလမင်းတို့ ဖြစ်၏။ သူတို့ သည် ဗုဒ္ဓထံ သို့ လာ၍ ဖူးမြော်သောအခါ၌ ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတို့ ကို လက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်၍ ပါးစပ်ဖြင့် အထပ်ထပ် နမ်းရှုပ်ကြလေသည်။ (မဇ္ဇိမနိကာယ်၊ ဗြဟ္မာယုသုတ်နှင့် ဓမ္မ စေတီယသုတ်)
ကောသလမင်းသည် ဓမ္မစေတီယသုတ်၌ ဗုဒ္ဓကို လူတို့ မည်မျှကြည်ညိုလေးစားကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓ၏တရားပွဲ၌ တရားနာပရိသတ်မှာ ဗုဒ္ဓကို အလွန်လေးစား၍ တိတ်ဆိတ်စွာ တရားနာကြားသောကြောင့် တစ်စုံတယောက်ချောင်းဟန့် သံ၊ တံတွေးထွေးသံကို ဘယ်အခါမျှ မကြားရပါ။ တခါသော် မိမိသည် မှူးမတ်ဗိုလ်ပါများနှင့် ခရီးထွက်သွား၍ ညစခန်းချသောအခါ က္ကုသိဒတ္တ နှင့် ပုရာဏအမည်ရှိ အမတ်ကြီးနှစ်ဦးသည် မိမိတို့ ၏ အရှင်သခင် ဘုရင်ရှိရာဘက်ကိုခြေပြု၍ ဗုဒ္ဓရှိရာအရပ်ကိုကား ခေါင်းပြုလျက် အိပ်ကြပါသည်ဟု လျှောက်ထား၏။
ပရိဗိုလ်တစ်ဦးကလည်း ရဟန်းဂေါတမသည် အရာမကများစွာသော ပရိသတ်အား တရားဟောနေစဉ် တစ်စုံတယောက်သောသူမျှ ချေဆတ်ခြင်း၊ ချောင်းဟန့် ခြင်း မပြုပဲ ရိုသေစွာ တရားကြားနာကြပါသည်။ သိက္ခာချ၍ လူထွက်ကုန်သောတပည့်တို့ သည် ရဟန်းဂေါတမ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို သာလျှင်ဆိုလေ့ရှိသည်။ သူတပါးကို မကဲ့ရဲ့ ပဲ မိမိတို့ ကိုယ်ကိုသာ ကဲ့ရဲ့ ကြပါသည် ဆို၏။ (မဇ္ဖိမနိကာယ်၊ မဟာသကုလုဒါယီသုတ်)
ဤသို့ များစွာသော လူတို့ ၏ ကြည့်ညိုလေးစားခြင်းကိုခံရသော်လည်း ဗုဒ္ဓသည် မိမိအား လွန်လွန်ကဲကဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကြည်ညိုမှုကို လုံးဝမလိုလားချေ။ မိမိအား အလွန်အမင်းကြည်ညိုသော ၀က္ကလိရဟန်းအား မိန့် ကြားချက်သည် ရှင်လင်းပြတ်သား၏။ "၀က္ကလိ၊ ဤအပုပ်ကောင်ကို ဖူးမြင်ခြင်းဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်း။ ၀က္ကလိ၊ တရားကိုမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မြင်သည်မည်၏။ " (သံယုတ္တနိကာယ်၊ ခန္ဓသံယုတ်၊ ၀က္ကလိသုတ်)
စင်စစ်ဗုဒ္ဓသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်း၌ အာဏာရှင်၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ အားပေးလေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှုကို အတိအလင်း ဆန့် ကျင်သည့် ရှေးဦးပထမ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဆိုက မှားမည်မဟုတ်ချေ။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်သော ဗုဒ္ဓမိန့် ကြားချက်များကို ရှေ့ ၌ဆိုပြပါအံ့။
ဗုဒ္ဓသည် မိမိအား အလွန်အမင်း ချီးကျုးပူဇော်မှုကိုလည်း မနှစ်သက်ချေ။ တခါသော် ဗောဓိမင်းသားသည် ဗုဒ္ဓအား နန်းတော်သို့ ဆွမ်းစားရန် ပင့်ဖိတ်၍ ဗုဒ္ဓ ကြွလာမည့်လမ်း၌ အဖိုးတန် ကမ္ဗလာပုဆိုးဖြူကို ခင်းထား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ကြွလာ၍ ပုဆိုးဖြူခင်းထားသည်ကို မြင်သော် ရှေ့ ဆက်မသွားပဲ ရပ်တန့် ၍နေ၏။ မင်းသားက ပုဆိုးဖြူကိုအခင်းအားလုံးကို ရုပ်သိမ်းပြီးသောအခါမှ နန်းတွင်းသို့ဝင်တော်မူ၏။ (မဇ္ဇိမနိကာယ်၊ ဗောဓိရာဇကုမာရသုတ်)
လူအများ၏ ချီးကျူးပူဇော်ခြင်း ခံရသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဗုဒ္ဓသည် မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချ၍ ပြောလေ့ရှိ၏။ ပရဗိုဇ်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓသည် အစစအရာရာ၌ ခြိုးခြံစွာ ကျင့်နိုင်ပါပေသည်ဟု ချီးကျူး၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မိမိ၏ ခြိုးခြံမှုမှာ အချို့ သော တပည့်ရဟန်းတို ၏ ခြိုးခြံစွာကျင့်မှုနှင့်စာသော် ဘာမျှမပြောပလောက်ပါ။ ထိုတပည့် ရဟန်းတို့ က မိမိထက်သာလွန်၍ ခြိုးခြံစွာ နေထိုင်စားသောက်ကြပါသည်ဟု မိန့် ကြား၏။ (မဇ္ဇိမနိကာယ်၊ မဟာသကုလုဒါယီသုတ်)
တစ်နေ့ သောညနေချမ်း၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းများနှင့်အတူ ထိုင်လျက်ရှိစဉ် "ရဟန်းတို့ ၊ သင်တို့ သည် အကယ်၍ ငါ၌ ကိုယ်နှင့် နှုတ်နှင့် စပ်သော အပြစ်တစုံတရာတွေ့ မြင်ခဲ့ပါက ငါအား လျှောက်ထားကြကုန်လော့" ဟု မိန့် တော်မူ၏။ (သဂါထာသဂ္ဂသံယုတ်၊ ၀ င်္ဂီသသုတ်)
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်မှု၊ သနားကြင်နာမှု၊ ထောက်ထားစာနာမှုစသော ဂုဏ်များကိုအထူး ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသော ပါဠိတော်မှာ ဒိဃနိကာယ်မှ မဟာ ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်ဖြစ်၏၊ ဤနေရာ၌ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုကို ထင်ဟပ်နေသော နောက်ဆုံးမိန့် ကြားချက်များကို ဖော်ပြပါအံ့။
ဗုဒ္ဓသည် ရွှေပန်းထိမ်သည်သား စုန္ဒ၏ ၀က်သားဟင်းကို ဘုဉ်းပေးပြီးနောက် ၀မ်းသွေးသွန်ရောဂါ အပြင်းအထန် ခံစားရ၏။ သို့ ရာတွင် ဥန္ဒအား စိတ်မကောင်းမဖြစ်စေလိုသောကြောင့် ဘုရားရှင် နောက်ဆုံးဘုဉ်းပေးသောဆွမ်းသည် အခြားဆွမ်းတို့ ထက် အကျိုးအာနိသင် ကြီးမားသည်ဟု ဘုရားရှင်၏ မျက်မှောက်မှ ကြားလိုက်ရကြောင်း ပြောပြ၍ စုန္ဒ၏ နှလုံးမသာခြင်းကို ဖြေဖျောက်ရန် အရှင်အာနန္ဒာအား မှာကြားတော်မူခဲ့၏။
အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓသည် ပရိနိဗ္ဗာန် မစံဝင်မီ တပည့်သံဃာတို့ အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ မှာကြားတော်မူခဲ့လိမ့်မည်ဟု မိမိ ယုံကြည်ပါကြောင်း လျှောက်ထား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမိန့် ကြားသော စကားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
"အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားအား သင်တို့ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှလောက် တောင့်တနေ ဘိသနည်း။ ငါသည် တရားဓမ္မကို အကြွင်းမဲ့ ဟောကြားခဲ့ပေပြီ။ သင်တိုသည် ငါ၏ နောက်လိုက်ဖြစ်သည်၊ ငါသည် သင်တို့ ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဟု ငါမယူဆခဲ့ချေ။ အာနန္ဒာ၊ ငါသည် ယခု အိုမင်း၍ ဘ၀ခရီး၏ အဆုံးပိုင်းသို့ ရောက်ရှိနေပေပြီ၊ ထို့ ကြောင့် သင်တို့ သည် မိမိကိုယ်သာ မှီခိုကိုးကွယ်ရာပြု၍ နေကြကုန်လော့။ တရားမှတပါး မှီခိုကိုးကွယ်ရာမရှိဘဲ တရားသာလျင် မှီခို ကိုးကွယ်ရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော "
တစ်နေရာ၍ အရှင်သာရိပုတ္တရာက သဗ္ဗညုတဉာဏ်အရာ၌ မြတ်စွာဘုရားထက် သာလွန်၍သိသော သမဏဗြာဟ္မဏသည် ရှေးကမရှိခဲ့၊ နောင်ရှိမည်လည်း မဟုတ်၊ ယခုလည်းမရှိဟု ကျွနိုပ် ယုံကြည်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက " သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည် ပွင့်ပြီး၊ ပွင့်ဆဲ၊ ပွင့်လတ္တံ့ သော ဘုရားရှင်တို့ ၏ စိတ်ကို သင်၏ ညဏ်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ မသိပါဘဲလျက် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ကြီးကျယ်ခန့် ညားလှသော၊ တိကျလှသော စကားကို ဆိုဘိသနည်း" ဟု မိန့် တော်မူ၏။
ကုသိနာရုံဥယျာဉ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခါနီးတွင် နတ်ဗြဟ္မာများစွာတို့ သည် လာရောက်၍ ဗုဒ္ဓအား ပူဇော်ကြ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက "အာနန္ဒာ၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့ သည် ဤသို့ ပူဇော်ကာမျှဖြင့် ငါဘုရားအား မြတ်နိုးသည် မမည်သေး၊ အကြင်ဥပါသကာ ဥပါသိကာမ တို့ သည်လည်းကောင်း၊ ရဟန်းယောင်္ကျား၊ ရဟန်းမိန်းမတို့ သည် လည်းကောင်း ငါဟောကြားအပ်သောတရားနှင့်အညီ ကျင်ကြံနေထိုင်ကြ၏။ ထိုသူတို့ သည်သာလျင် ငါဘုရားကို ချစ်ကြည်မြတ်နိုး ရှိခိုးပူဇော်ကြသည်မည်၏" ဟု မိန့် တော်မူသည်။ အရှင်အာနန္ဒာက "အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်လားခဲ့သော် အလောင်းတော်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြုဖွယ်ကိစ္စကို အဘယ်သို့ပြုရပါအံ့နည်း " ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက " အာနန္ဒာ ၊ ငါဘုရား၏ အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်ခြင်းစသည်တို့ ၌ သင်တို့မကြောင့်ကြကုန်လင့်။ မိမိ၏ အစီးအပွားဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ရခြင်းငှာသာ များစွာလုံ့ လပြုကြကုန်လော " ဟု မိန့် တော်မူ၏။
ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ခါနီး၌ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်အာနန္ဒာအား "အာနန္ဒာ၊ ငါ၏ တပည့် ရဟန်းသံဃာတို့ သည် ငါ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သောအခါ ငါဘုရားမရှိပြီ၊ ငါလွန်ပြီဟု ထင်မှတ်ကြပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့မထင်မှတ်သင့်။ ငါဟောသောတရားသည် ငါလွန်သောအခါ သင်တို့ ဆရာဖြစ်လတ္တံ့ ။ ထို့ ကြောင့် ငါလွန်သောအခါ ငါရှိသည် ဟုသာ ကောင်းစွာမှတ်အပ်၏" ဟု မိန့် ကြား၍ ရဟန်းတို့ အား မိမိ၏ တရား၍ တစ်စုံတစ်ရာယုံမှားရှိလျှင် မိမိမလွန်မီ မေးလျှောက်ကြရန်၊ သတိပေး၏။ သို့ ရာတွင် ရဟန်းတို့ က မည်သို မျှ မမေးလျှောက်ကြချေ။ ထို့ နောက် ဗုဒ္ဓသည် "ရဟန်းတို့ ၊ သင်္ခါရတရားတို့ သည်ပျက်စီးတက်သော သဘောရှိကြကုန်၏။ သင်တို့ သည် မမေ့မလျော့သော သတိဖြင့် ကျင့်ကြံအားထုတ် ကြကုန်လော" ဟုနောက်ဆုံး မိန့် ကြားပြီးလျှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူ၏။
ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးဘ၀ ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြသော မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်သည် အခြားသုတ်များထက် ရှည်လျှား၍ အလွန်ထူးခြား မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောသုတ်ဖြစ်၏။ လောက၌ နဂိုမူလက စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသော သူတို့ သည်ပင် အိုမင်းသောအရွယ်၌ ကျန်းမာရေး များစွာယိုယွင်းပျက်ပြားမှု မရှိစေကာမူ အများအားဖြင့် စိတ်ဓာတ်ယိုယွင်း ဆုတ်ယုတ်လာကြ၏။ ငါစွဲကြီးမား၍ သူတပါးအပေါ် ဆရာလုပ်လိုခြင်း၊ သူတပါးကို အပြစ်မြင်၊ အထင်သေးခြင်း၊ စာနာထောက်ထားမှု မရှိခြင်း သူတပါး၏ ဂရုစိုက်မြှောက်စားမှုကို လိုလားခြင်း၊ စသော စရိုက်လက္ခဏာများကို ပြတက်ကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည်ကား ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရ၍ မကျန်းမမာဖြစ်နေသော အသက် ၈၀ အရွယ်၌ပင် မိမိအား အကြောင်းပြု၍ သူတစ်ပါး စိတ်မကောင်းမဖြစ် စေလိုခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို အထင်အမြင်မသေးစေလိုခြင်း၊ (အရှင်သာရိပုတ္တရာအား မိန့် ကြားချက်) ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှု မဖြစ်စေလိုခြင်း၊ စသောလက္ခဏာများဖြင့် မြင့်မားသော အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကို အထင်အရှား ပြသတော်မူခဲ့ပေသည်။
သို့ ဖြစ်၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပညာရှင်တစ်ဦးက မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ ကမ္ဘာ့စာပေ၌ အခံ့ညားဆုံး စိတ်အား တက်ကြွဖွယ်အကောင်းဆုံးစာပေတစ်ခု ဖြစ်ပါပေသည် (၁) ဟု ရေးသားခဲ့၏။ စင်စစ် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ ဗုဒ္ဓသည် နှောင်းလူတို့ က လွန်ကဲသော သဒ္ဒါယုံကြည်စိတ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော အနန္တဘုန်းတော်ရှင် မဟုတ်တော့ပဲ အလွန် စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်၍ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာ့ စံပြ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်အဖြစ် ပေါ်လွင်ထင်ရှားလျက် ရှိပေသည်။
(၁) Bryan de Krester, "Man in Buddhism and Christianity' P-67
စိတ်ထဲထွေနေတာနဲ့ ခြောက်ကပ်ကပ်စာအုပ်စင်ပေါ်က မြန်မာကနေယူလာခဲ့တဲ့ ဦးအေးမောင်(ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကျမ်းပြု) ရေးသားတဲ့ ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ ထူးခြားချက်များ ကို ဖတ်ရင်းနဲ့တခါတည်းရိုက်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ အားလုံး ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ တချို့ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာကလွဲရင် (မရိုက်တက်လို့ )။ ဒါက အခန်း (၁) ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:36 AM
This is my (100%) favorite book in my life. If someone want to know the Buddhism reasonably, he should read this book. However, the Buddhism in this book is quite different from traditional Buddhism which is believed by most of Myanmar. So, if u read this book, dare to think and open ur mind.
For example, the author of this book didn't accept the 'Tat Bay Nyu Ta Nyan' (knowing everything) and the magical powers of Buddha.
Anyway, I like it vvvvvv much!
(ဗုဒ္ဓသည် ရွှေပန်းထိမ်သည်သား စုန္ဒ၏ ၀က်သားဟင်းကို ဘုဉ်းပေးပြီးနောက် ၀မ်းသွေးသွန်ရောဂါ အပြင်းအထန် ခံစားရ၏။ သို့ ရာတွင် ဥန္ဒအား စိတ်မကောင်းမဖြစ်စေလိုသောကြောင့် ဘုရားရှင် နောက်ဆုံးဘုဉ်းပေးသောဆွမ်းသည် အခြားဆွမ်းတို့ ထက် အကျိုးအာနိသင် ကြီးမားသည်ဟု ဘုရားရှင်၏ မျက်မှောက်မှ ကြားလိုက်ရကြောင်း ပြောပြ၍ စုန္ဒ၏ နှလုံးမသာခြင်းကို ဖြေဖျောက်ရန် အရှင်အာနန္ဒာအား မှာကြားတော်မူခဲ့၏။)ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကျမ်းပြုစာအုပ်လည်း ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိပါတယ်..
စာအုပ်ကောင်းပါပဲ.. အရှင်ဥာဏိဿ၇ ဟောတဲ့ (မူလ တောင်မြို့ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ) နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓ ကိုနာကြားကြည့်စေလိုပါတယ်.. ၀က်သားဟင်းဘုန်းပေးပြီးမှ ၀မ်းသွေးသွန်တာမှန်ပေမယ့် ၀က်သားကြောင့်ဖြစ်တာလို့ စာဖတ်သူတွေထင်မှာစိုးရိမ်မိပါတယ်..